Suxufiyiin tababar uga socday Garoonka Aadan Cadde Airport oo si khaldan hilib Doofaar ama (Qaansiir) loo siiyey. | Salaan Media
Suxufiyiin tababar uga socday Garoonka Aadan Cadde Airport oo si khaldan hilib Doofaar ama (Qaansiir) loo siiyey.
Magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa waxaa tababar loogu soo xidhay maalintii shalay 25 suxufi oo ka kala socda 25 xarumo warbaahineed oo isugu jira Telefishino, idaacado, wargeyso iyo websiteyada.
Tababarkaan ayaa waxaa qabashadiisa iska kaashaday ururka Qaran ee suxufiyiinta Somaaliyeed NUSOJ iyo hay’adda AU/UN Information Support Team (IST) oo dhinaca warbaahinta ka caawisa Qaramada Midoobay iyo sido kale Midowga Afrika.
Tababarka oo soconayey muddo afar maalmood ah ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport waxaana lagu baranayey habka baadhista ee saxaafadda.
Tababarkan ayaa waxaa bixinayay macalimiin aqoon durugsan u leh mihnada saxaafadda oo isugu jira Soo ajnabi, waxaana ka mida qubaradaasi tifaftirihii hore ee laanta af-Soomaaliga ee BBC-da Yuusuf Garaad Cumar Axmed iyo Andrew Hill oo ah weriye horey uga soo shaqeeyay wakaaladda wararka dalka Ingriiska ee Reuters.
Hadaba xad gudub aad xun ayaa loo geystay suxufiyiintii ka qeyb galeysay tababarkaasi maalintii ugu dambeysay ee gebagebada aheyd ka dib markii raashiin ahaan loogu keenay hilibka doofaarka sida ay sheegeen qaar ka mid ah suxufiyiintii ka qeyb galeysay tababaarkaas.
Mid ka mid ah suxufiyiintaas ayaa u sheegay dayniile.com in markii loo keenay hilibkaas ay si weyn uga shakiyeen, shakigaasna uu cadaaday markii kooxdoo raashiinka u qeybinaeysay oo tirsan shirkadda SKA ee garoonka gacanta ku heysa ay sheegeen in waxa loo keenay uu yahay hilib doonfaar arintaasoo uu sheegay iney aad uga caroodeen dhamaan suxufiyiintii ka qeyb galeysay tababarkaas.
“Yuusuf Garaad oo aan cunin hilibkaas shaki awgiis ayaa mar dambe nagu wargeliyey in waxa na hor yaala uu yahay hilib qaansiir, lagana digtoonaado, waan argagaxnay ka dib shaqaalihii shirkada SKA ee raashiinka noo keenay ayaanu weydiinay arintaas, wayna noo xaqiijiyeen, iyagoo sababta ay noogu keeneen markaan weydiinayna noogu jawaabay sidaa ayaa nalagu amray” ayuu ntaa ku daray weriyahaas ka gaabsaday magaciisa oo sii hadlayey.
Weriyeyaal kale oo markii hore cunay qaar ka mid ah hilib qaansiirkaas iyagoo aan ka warqabin ayaa markii ay ogaadeen bilaabay iney is matajiyaan, waxaana la sheegay in goobta uu ka dhacay muran iyo isqabqabsi badan oo ku sigtay gacan ka hadal kaasoo dhexmaray suxufiyiinta lagu siray hilibka qaansiirka iyo shaqaalaha u keenay ee ka tirsan shirkadda SKA ee maamusha howlaha garoonka Aadan cadde.
Hilibka qaansiirka ayaa diinta islaamku waxay ka mamnuucday iney cunaan dadka muslimiinta ah, waxaana dastuurka ku xusan qodob sheegaya in ficil kasta oo khilaafsan shareecada Islaamka aan gudaha dalka lagu sameyn Karin, waxaana iyadoo ay taasi jirto wax la iska weydiinayaa sida ay ku dhacday in garoonka Muqdisho lagu isticmaalo hilib qaansiir tiiyoo ay wadanka ka jirto dowlad la sheego mid rasmi ah hase ahaatee ay muuqato ineysan wax badan kala socon waxa ka soo degaya garoonka Aadan cadde.